I-Cinnamon ibhekwa njengenye yezinongo ezindala kunazo zonke ezaziwayo kumuntu. Abadala bawasebenzisa ekwenzeni iziphuzo, ama-broth kanye nezitsha eziningi ezidumile, futhi siyaqhubeka sengezela ekuqalisweni kwethu kokucubungula. Akekho oyomangala ngamadlekhi okumnandi, ephazamise umqondo wokuhogela ngephunga elimnandi le-sinamoni, ikhofi enhle kakhulu, ukufudumala iwayini elimnandi. Naphezu kokudla kwezidakamizwa ezidumile, abapheki abaningi basebenzisa insimu efomini yomhlabathi, futhi akuwona wonke umuntu owaziyo ukusebenzisa izinti zesinamoni ekuphekeni.
Izwe lensiza engavamile
Uma ubheka imithombo yomlando, ungathola ukuthi leyo mpumalanga ye-Asia ibhekwa njengendawo yokuzalwa yesinamoni , kodwa lokhu akuqinisekisi ukuthi noma yimiphi i-spice eqoqwe kulesi sifunda izohambisana ne-high quality index. Umkhiqizo ongcono kakhulu yi-spice, olethwe eSri Lanka. Umkhiqizi wezwe wesibili ngu-India. Kubalulekile ukuba unake indawo lapho kuneziqhumane ezibuthene khona, ngoba izimpahla ezivela e-Indonesia, eBurma, eVietnam naseChina azigcini nje ngokuncintisana nezinongo ezikhuliswe ngabakhiqizi, kodwa futhi zilimaza impilo. Kula mazwe, ukukhula ngokuqhubekayo kwesinamamoni esikhundleni - i-cassia, uma ubheka ukubukeka, akukwazi ukuhlukaniswa ne-spice yokuqala, futhi umehluko wokunambitha uzotholakala kuphela umuntu owazi kahle kule ndaba. Le sinamoni ngeke neze ithinte umzimba ngendlela engafanele, kodwa uma kwenzeka i-cassia kungenzeka - ukubunjwa kwe-spice kubandakanya i-coumarin, eyanciphisa i-coagulability yegazi.
Ngaphambi kokuba uthathe ukupheka, udinga ukucabangela ngokucophelela ukuthi ungasebenzisa kanjani izinti zesinamoni ekwenzeni ubuciko obuhle. Ukupheka imikhiqizo yefulawa kulula futhi ngokushesha ukuthenga inguquko yomhlabathi we-spice esiphukayo, cishe zonke izitolo zanamuhla zisezihlakalweni zalo lo mkhiqizo. Umkhiqizo we-powder ungabuye wengezwe ikhofi. Uma inhloso yokupheka i-cocktail noma itiye, lapho kubalulekile ukudlulisela ukunambitheka kuphela, kodwa nokubukeka okumnandi, kungcono ukuthenga isinamoni ezintikeni. Akushiyi izinsalela ezinamafu. I-tea nge-sinamoni izintiyo akuyona nje kuphela yangempela, kodwa futhi iyinhle kakhulu.
Ukupheka kwezinye izitsha kusikisela ukuthi kukhona ukunambitheka, kushiywa ubukhona bezinongo phakathi nenqubo yokupheka. Ekugcineni, i-spice akufanele ibe esitokisini, kukhona abanolwazi abanokuhlangenwe nakho kohlelo lwe-culinary futhi usethe isibonelo sendlela yokusebenzisa izinti zesinamoni ukuze uphume esimweni esibucayi. Zomisiwe emafutheni omifino, bese zilahlwa, ngaleyo ndlela zilondoloze ukunambitheka kwezipayisi ngaphandle kokukuthola ezinxenyeni zesidlo. Ngakho-ke, i-powder ayikwazi ukukhishwa futhi.
Mangingaki izikhathi engingayisebenzisa ngazo izinti zesinamoni?
Abaningi besifazane bayazibuza ukuthi kungenzeka yini ukusebenzisa izinti zesinamoni izikhathi eziningana, noma ukulahla kahle emva kwesicelo sokuqala? Konke kuncike ekuthandweni kwakho komuntu ohlala naye. Uma upheka uphakamisa, ugaxe noma ungeze i-sinamoni kwiwayini eliyi-mulled, ngemuva kokupheka, ungayithola futhi ulisebenzise izikhathi eziningana. Kodwa-ke, ungakhohlwa ukuthi nge-sinamoni ngayinye yesikhathi esisha izonikeza ukunambitheka okuncane kwesidlo, futhi ukunambitheka kuzoba kubi kakhulu. Umbono wabesifazane besifazane wehlela eqinisweni lokuthi inani elihle lokusebenzisa izinti zezipayisi ziphindwe kathathu.
Indlela yokugaya isinamoni?
Ukuphila kuveza izinto eziningi ezimangazayo: uma ufika esitolo nge-powder yesinamoni, awukwazi ukukuthola, kodwa uthenge i-spicery ngesimo sezinti. Abapheki abangenalwazi bangazibuza ukuthi bangasebenzisa kanjani izinti zesinamoni ekuphekeni ukupheka? Impendulo icacile - ukugaya, kodwa lapha umuntu uxwayisa ubuningi bezingcweti zobuchwepheshe.
Ukuthola isinamoni elinjalo kwi-grater kuyinkinga enkulu kakhulu, ukuzama ukuyenza ku-grinder yekhofi noma nge-blender akuwona umqondo omuhle kakhulu, esikhundleni se-powder omuhle uzothola iziqu ezinkulu nokungalingani. Indlela enembile yokomisa umgodi owenziwe ogwadule owomile, okhipha umswakama owedlula kuwo, okwenze ube buthakathaka, futhi iphunga elimnandi abantu abathanda i-spice lizoqinisa izikhathi eziningana.
Isinyathelo sesibili kuyobekwa ukufakwa kwenduku encomekile ephaketheni elinyene bese uligaya ngepini lokugcoba, kuphela emva kwalokho izingcezu ezitholakalayo zingahle zibe ngaphansi kwe-grinder noma i-blender. Awudingi ukuchoboza yonke isinamoni ngesikhathi esisodwa, izinti zonke zigcina ukunambitheka kugcwele unyaka, futhi i-powder ingxenye nje kuphela leso sikhathi.
Inombolo yamafutha abalulekile asetshenziswe ngumuntu ngezimonyo noma ngezinjongo zokwelapha, namuhla athola inani elikhulu. Amafutha e-Cinnamon ayithandwayo. Akukhona ukuthi izimfanelo ezinhle zaleli thuluzi zithuthukiswa, kodwa ngoba abantu abaningi balandela imfashini, futhi bathola izitayela ezikhangiswayo kuphela. Umlando uqinisekisa amaqiniso: ezikhathini zasendulo i-cinnamon yayidinga kakhulu, futhi inani lezinsipho lincintisana ngempumelelo ngemikhiqizo yegolide. Abagqugquzeli bemithi yamaShayina bacabangela isinamoni njengenye yezingxenye zezokwelapha eziqine kakhulu, kodwa naphezu kwalokhu, bambalwa abantu abafuna le njongo ngamafutha ngenhloso.
Ceylon sinamoni. Indlela yokuhlukanisa kusuka ekukhohliseni?
I-spice engcono kakhulu ikhishwa emagqumeni omuthi okhula eSri Lanka noma eNtshonalanga India. Okwamanje, lapho abaningi bezazi izindaba zendlela izitolo ezikhohlisayo ngayo amakhasimende, ukunikeza ikhasiya, enezinto eziningana ezingalungile, okwenziwe ngezipayisi zangempela, i-Ceylon cinnamon idinga kakhulu phakathi kwabathandi bezinongo ezimnandi. Hlola ukuthengwa esitolo ngezindlela eziningana. Ukuze wenze lokhu, udinga ukutadisha ngokucophelela izinti zezinamoni: i-spice yangempela inombala omnene obala obomvu, inkohliso idume ngophawu olubomvu olubomvu. I-Cassia ekusetshenzisweni kwezidingo kusukela eqoqweni lokuqoqa futhi ukufakwa kwesikhwama esitolo kukhubazekile, yona ngokwayo iyinkimbinkimbi kakhulu, ubuso bayo buhlala njalo, kahle noma cishe njalo, buyohlotshiswa nge-panel of cracks. Indlela yesithathu, eyenza sikwazi ukuqinisekisa ukuthi ukuthengwa kulungile yini: uphonsa ngentambo echotshoziwe nge-iodine - i-cassia izophendulela okwesibhakabhaka.
Njenganoma imuphi omunye umkhiqizo, i-sinamoni inehlu lwezinto ezihle nezibi. I-Spiciness ngokwayo ayikwazi ukulimaza impilo yomuntu, kodwa konke kungashintsha uma iqala ukuhlukumeza iziphuzo: ungayidli izinkezo zonke, ikakhulukazi izikhathi eziningana ngosuku olulodwa. I-Cinnamon isiza ukulahlekelwa isisindo, okubangela ukuthi abanye abantu bacabange ukuthi ukwandisa umthamo kuzosiza ekufezeni imiphumela engcono, kodwa lokhu akusiyo isipayisi okuzohamba ngayo ngale ndlela "nge-bang." Ngomthamo olinganiselayo wokuvuna kunomthelela ekuthuthukiseni konke komzimba, kodwa kufanelekile ukuwela umugqa, futhi umphumela ungase ubonakale uhlukile ngokuvumelana nalokho okufunayo. Inani elincane le-sinamoni lizophazamisa kahle umsebenzi wengqondo, futhi ngokuhamba kwesikhathi futhi ohlelweni lokubukwa, noma kunjalo, izilwane zizophendula ngokudlula ngokweqile ngokunciphisa amandla, isimo somzwelo sizocindezeleka, futhi ubuhlungu obukhulu ekhanda buzovela.
Kuphi ukuthenga izinti zesinamoni?
Lo mbuzo ubuzwa ochwepheshe abaningi beCulinary. Ikakhulukazi labo abawazi ukusebenzisa izintambo zesinamoni ekuphekeni, ngoba ukunambitheka kwe-seasoning okudayiswa ngaleli fomu kunamandla futhi kunomusa kunokwama powder, okwenza abantu bakhethe ukukhetha. Akuzona zonke izitolo ezingatholakala kulo mkhiqizo, kodwa kumasevisi wabasebenzisi bezitolo ze-inthanethi ze-World Wide Web.